तपाईको आजको दिन कस्तो छ ? हेर्नुहोस् आजको राशिफल « Niatra TV
वि.सं. २०७६ जेठ ३०, बिहीबार, इ.स. २०१९ जुन १३, शकसंवत् १९४१।
मेष राशि – स्वास्थ्य राम्रो रहन्छ। तपाईं अरूको लागि बढी खर्च गर्न चाहनु हुनेछ ।
वृष राशि – तपाईंको हंसमुख स्वभावले अरूलाई खुसी राख्नेछ । आर्थिक सुधार भएमा तपाईंलाई महत्त्वपूर्ण खरीद गर्नको लागि सुविधा हुनेछ ।
मिथुन राशि – छोराछोरीसँग हुँदा सान्त्वना प्राप्त गर्नुहोस्। आफ्ना परिवारका मात्रै नभएर अन्य परिवारका छोराछोरीको चिकित्सकीय शक्तिले तपाईंलाई सान्त्वना दिन्छ ।
कर्कट राशि – भाग्यमा निर्भर नहुनुहोस, आफ्नो स्वास्थ्य सुधार गर्ने प्रयास गर्नुहोस् किनकि भाग्यवान् अल्छी देवी हो । बुद्धिमानीपूर्वक लगानी गर्नुहोस् ।
सिंह राशि – तपाईंको आशा धेरै सुगन्धित र अचम्मलाग्दा फूल जस्तै फुल्नेछ । बुद्धिमानीपूर्वक लगानी गर्नुहोस् । तपाईंको जोडीले आनन्द दिने प्रयास गर्नाले आज आनन्द भरिएको दिन हुनेछ ।
कन्या राशि – बढी खानबाट जोगिनुहोस् र आफ्नो वजनमा रोक लगाउनुहोस् । आफ्नो निवासको विषयलाई लिएर लगानी गर्नु लाभदायक हुनेछ।
तुला राशि – सांझ चलचित्र-थिएटर वा आफ्नो जोडीसित खानाले तपाईंलाई तनाउमुक्त र सुन्दर मुडमा राख्नेछ । प्राचीन वस्तु र गहनामा लगानी गर्नाले लाभ र समृद्धि हुनेछ ।
वृश्चिक राशि – मित्रबाट गरिएको एउटा विशेष प्रशंसा तपाईंका आनन्दको स्रोत हुनेछ। यसको कारण के हो भने तपाईंले ती जीवनजस्ता रूखहरू खडा गर्नुभएको छ जसले अरूलाई छाया दिन आफु खडा भएर प्रचण्ड गर्मी सहन गर्दछन् ।
धनु राशि – तपाईं आफैंलाई राम्रो बनिएको महसुस गराउनको लागि काम गर्ने अद्भुत दिन। तपाईंलाई आकर्षित गर्ने लगानीको योजना बारे थप पत्ता लगाउन धेरै कुरा जान्नुहोस् – कुनै पनि निर्णय लिनु अघि आफ्ना विशेषज्ञहरुसँग परामर्श गर्नुहोस् ।
मकर राशि – तपाईंको आकर्षक व्यवहारले ध्यान आकर्षित गर्नेछ । केही महत्त्वपूर्ण कामहरूमा नराम्रो वित्तीय स्थितिको कारण रोक लाग्नेछ ।
कुम्भ राशि – तपाईंको लागि मान्छेलाई जबरजस्ती काम गर्ने बाध्य नगराउनुहोस्। तपाईंलाई असीमित आनन्द दिने अरूलाई गर्न चाहेको र चासोको बारेमा सोच्नुहोस् ।
मीन राशि – आनन्ददायी यात्रा र सामाजिक भेलाहरूले तपाईंलाई तनाउमुक्त र खुसी राख्नेछ। मान्छे तपाईंबाट के चाहन्छन् र के जरूरी छ भन्ने कुरा तपाईंले ठ्याक्कै थाहा पाउने जस्तो देखिन्छ तर आज खर्च गर्नमा त्यति धेरै उदार पनि हुने प्रयास नगर्नुहोस्।